Sethula i-Airbnb entsha
Abantu bazivumelanisa nezimo kunanini ngaphambili mayelana nokuthi baya kuphi nokuthi baya nini. Ukuze sibasize basebenzise la mathuba amasha, sethula ushintsho lwethu olukhulu eminyakeni eyishumi—okuhlanganisa indlela entsha ngokuphelele yokusesha, indlela engcono yokuhlala isikhathi eside, nezinga elingenakuqhathaniswa lokuvikeleka.
Indlela entsha yokusesha
Ukwethula idizayini entsha, eyakhiwe ngeZigaba Ze-Airbnb, ukuze izivakashi zethu ziwuhlole kalula umhlaba we-Airbnb—futhi zithole izindawo ebezingeke zikwazi ukuzisesha.
Izigaba Ze-Airbnb. Yenzelwe ukusiza izivakashi zithole izindlu eziyingqayizivele.
Ababungazi bethu banikeza izigidi zezindlu eziyingqayizivele emhlabeni jikelele. Izigaba Ze-Airbnb zizihlela zibe amaqoqo ahlelekile, ngezigaba ezingaphezu kuka-50 zamakhaya akhethelwe isitayela sawo, indawo, noma imisebenzi eseduze. Zihlanganisa:
Izindawo ezibabazekayoAmakhaya angu-27,000
Ama-bed & breakfastAmakhaya angu-20,000
Amakhishi abaphekiAmakhaya angu-6,000
Izindawo ezinobucikoAmakhaya angu-900
Eziklanywe kahleAmakhaya angu-27,000
Ezisezindaweni zegalofuAmakhaya angu-150,000
Ezinamapiyano amakhuluAmakhaya angu-2,800
Amakhaya omlandoAmakhaya angu-4,000
Ezingasemapaki kazwelonkeAmakhaya angu-750,000
Amakhaya ahlanganyelwayoAmakhaya angu-650,000
Ezisezindaweni zokushushuluza eqhweniAmakhaya angu-300,000
Ezisezindaweni zokushushuluza olwandleAmakhaya angu-240,000
Ezisezindaweni ezishisayoAmakhaya angu-500,000
Isigaba Seziklanywe Kahle
Izivakashi manje zingathola kalula amakhaya angaphezu kuka-20,000 akhethelwe izakhiwo zawo ezidumile nengaphakathi lazo, okuhlanganisa ubuciko babaklami abafana no-Frank Lloyd Wright no-Le Corbusier.
Ibungazwa ngu-Rick no-Steph
Indlela esisungula ngayo Izigaba Ze-Airbnb
Kukhethwe emakhaya ayizigidi eziyisithupha
Ababungazi be-Airbnb banikeza iqoqo elikhulu kunawo wonke lamakhaya ahlukile emhlabeni—kusukela ezindlini ezakhiwe esihlahleni kuya emakhaya amancane—amadolobheni angaphezu kuka-100,000 emazweni angu-220.
Kuhlaziywe ngokufunda ngomshini
Sihlola izindlu ku-Airbnb ngokusebenzisa ukufunda ngomshini ukuze sihlaziye izihloko, izincazelo ezibhaliwe, ukuphawula kwezivakashi, izincazelo zesithombe, neminye imininingwane.
Amalungu eqembu lokuhlela le-Airbnb ahlola izindlu futhi akhethe ezithombeni ezikhona. Ngemva kwalokho isigaba ngasinye sidlula ekuhloleni kokugcina kokubheka ukungaguquguquki nekhwalithi yezithombe.
Ukwethula Ukuhlala Okuhlukene Kabili
Sebebaningi kunanini ngaphambili abantu abathatha uhambo olude. Ukuze sibanikeze okwengeziwe abangakukhetha lapho behlela sisungule Ukuhlala Okuhlukene, isici esisha esihlukanisa uhambo phakathi kwamakhaya amabili ahlukene—manje izivakashi zingathola isilinganiso esingu-40% sezindlu ezengeziwe lapho zisesha lezo zindlu zokuhlala isikhathi eside.
Indlela engcono yokuhlala isikhathi eside
Amakhaya amabili endaweni eyodwa
Lapho izivakashi zifuna ukuhlala isikhathi eside endaweni eyodwa, sizonikeza ithuba lokuhlukanisa uhambo lwazo phakathi kwamakhaya amabili ahlukene endaweni.
Amakhaya amabili esigabeni esisodwa
Ukuhlala Okuhlukene Kabili nakho kuhlinzekwa ngezigaba ezingu-14 ezihlukahlukene, okuhlanganisa Ukukhempa, Amapaki Kazwelonke, Ukutshuza Olwandle, nokunye, ukuze izivakashi zijabulele amakhaya noma imisebenzi efanayo ezindaweni ezimbili. Ngokwesibonelo, isivakashi esibhrawuza Isigaba Samapaki Kazwelonke singase sithole Ukuhlala Okuhlukene Kabili okusikisela ikhaya eliseduze ne-Zion nelinye eliseduze ne-Grand Canyon.
Okokuzithokozisa okukodwa okulula
Sibhangqa ngokuhlakanipha amakhaya amabili, afanayo ngokwendawo, uhlobo lwendlu, namasevisi.
Ukuhlala Okuhlukene ebalazweni ngesithombe esibonisa ngokucacile ibanga phakathi kwamakhaya nokulandelana kokuhlala.
Lapho isivakashi sikhetha Ukuhlala Okuhlukene Kabili, siqondiswa ngezinyathelo okulula ukuzilandela zokubhukha ikhaya ngalinye—elilodwa ngesikhathi.
Izinga elingenakufaniswa lokuvikeleka
I-AirCover iyisivikelo samahhala esihlanganisa konke ekuvakasheni, esinikeza izivakashi zethu ukuqiniseka kokwazi ukuthi uma okuthile kungahambi kahle, sizozisiza.
Ukuvikelwa okuphelele kwezohambo. Kufakiwe njalo, kumahhala njalo. Ku-Airbnb kuphela.
I-AirCover inikeza izivikelo ezine kuzo zonke izivakashi kukho konke ukuhlala
Isiqinisekiso Sokuvikelwa Kokubhukha
Esimweni esingavamile lapho uMbungazi kudingeka akhansele ukubhukha phakathi nezinsuku ezingu-30 ngemva kokungena, sizotholela izivakashi ikhaya elifanayo noma elingcono, noma sizozibuyisela imali.
Uma isivakashi singakwazi ukungena ekhaya laso futhi uMbungazi engakwazi ukuyixazulula leyo nkinga, sizositholela ikhaya elifanayo noma elingcono lenkathi yokuhlala kwaso yasekuqaleni, noma sizosibuyisela imali.
Isiqinisekiso Sokuthola Okubhukhile
Uma nganoma yisiphi isikhathi phakathi nokuhlala kwesivakashi sithola ukuthi indlu ezikuyo ayifani nalokho okukhangisiwe—ngokwesibonelo, ifriji alisasebenzi futhi uMbungazi wakho akakwazi ukulilungisa kalula, noma inamakamelo ambalwa kunalawo abhaliwe—izivakashi zizoba nezinsuku ezintathu zokuyibika futhi sizokutholela ikhaya elifanayo noma elingcono, noma sizibuyisele imali.
Inombolo Yosizo Yamahora angu-24
Uma kwenzeka isivakashi sizizwa singaphephile, sizothola masinyane ama-ejenti aqeqeshwe ngokukhethekile ezokuphepha, emini noma ebusuku.
Thola imininingwane ephelele mayelana nendlela i-AirCover evikela ngayo ukubhukha kwesivakashi ngasinye nanoma yikuphi okungafakiwe okusebenzayo. Uma unguMbungazi, funda kabanzi ngokuthi i-AirCover isho ukuthini kuwe.
I-Airbnb kuphela enikeza zonke izivakashi i-AirCover
Izinzuzo ze-AirCover uma ziqhathaniswa nokuvikelwa okuphelele okunikezwa mahhala izimbangi zethu eziseduze kakhulu.
Iqembu eliqeqeshwe ngokukhethekile, elizinikele, elilungele ukusiza
I-AirCover iklanyelwe ngokuqondile ku-app newebhusayithi ye-Airbnb, okwenza kube lula ngezivakashi ukuba zixhumane ne-ejenti nganoma yisiphi isikhathi, futhi zixazulule izinkinga ngokushesha. Ukuze i-AirCover isebenze, sisungule iqembu lama-ejenti aqeqeshwe ngokukhethekile ukuze uthole usizo lokubhukha kabusha ngomzuzu wokugcina, futhi sikhulise Inombolo Yosizo Yamahora angu-24 ukuze itholakale ngezilimi ezengeziwe kunanini ngaphambili.